kuvhuraSUSE Leap 15.3 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Kubva kuLinux
kuvhuraSUSE Leap 15.3 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Mushure rinenge gore rekuvandudza kuburitswa kwekuparadzirwa kweLinux "openSUSE Leap 15.3" kwakaziviswa, Iyi vhezheni nyowani inochengetedza iyo Kernel 5.3.18, nepo pakati pezvimwe shanduko zvinomira pachena kusanganisa kwe systemd 246, iyo inogadziridzwa enzvimbo dzakasiyana dze desktop uye nezvimwe.
1 OpenSUSE Leap 15.3 Main Zvitsva Zvimiro
2 Dhawunorodha vhuraSUSE Leap 15.3
OpenSUSE Leap 15.3 Main Zvitsva Zvimiro
Iyi vhezheni itsva Yakaunzwa kubva kuvhuraSUSE Leap 15.3 yakavakirwa pane yepakati seti yeSUSE Linux Enterprise mapakeji pamwe nezvimwe zvetsika zvinoshandiswa kubva kuvhuraSUSE Tumbleweed repository. Chii chimwe, chinhu chakakosha che openSUSE Leap 15.3 iko kushandiswa kweiyo imwechete seti yemabhinari mapakeji ine SUSE Linux Enterprise 15 SP 3, pachinzvimbo chekuvakazve iyo SUSE Linux Enterprise src mapakeji ayo aiitwa mukugadzirira kuburitswa kwakapfuura.
Uchishandisa iwo mabhainari mapakeji muSUSE uye yakavhurikaSUSE inofanirwa kurerutsa kutama kubva kune kumwe kuendesa kune imwe, chengetedza zviwanikwa pakugadzirwa kwepakeji, kugovera zvidzoreso uye bvunzo, kubatanidza misiyano mumafaira espec, uye kukubvumidza iwe kumisa kuongorora. mhosho meseji.
Kana zviri shanduko dzinomira mushanduro iyi nyowani, ndizvozvo izvo zvikamu zvega zvekuparadzira zvakagadziridzwa, senge system maneja systemd iyo yakagadziridzwa kuita vhezheni 246 (yakamboburitswa neshanduro 234) uye package package DNF kushanduro 4.7.0 (pamberi pe4.2.19).
Padivi renzvimbo yedesktop, tinogona kuwana zvigadziriso ku Xfce 4.16, LXQt 0.16 uye Cinnamon 4.6, nepo enzvimbo dzekuwedzera, idzi dzinoramba dziri mushanduro imwechete yakapihwa muchirongwa chekare cheKDE Plasma 5.18, GNOME 3.34, Sway 1.4, MATE 1.24, Wayland 1.18 uye X.org Server 1.20.3 kugovera.
Nezve iyo system kurongedza, izvo zvitsva zvinyorwa zveLibreOffice 7.1.1, Blender 2.92, VLC 3.0.11.1, mpv 0.32, Firefox 78.7.1 uye Chromium 89 zvinokurudzirwa.
Yeimwe shanduko izvo zvinomira kunze kweiyi nyowani vhezheni ye openSUSE Leap 15.3:
Iyo KDE 4 uye Qt 4 mapakeji abviswa kubva kunzvimbo dzekuchengetedza.
Graphics akaendeswa kubva kuMesa vhezheni 19.3 kuenda 20.2.4 nerutsigiro rweOpenGL 4.6 uye Vulkan 1.2.
Mapakeji nyowani akapihwa kune vanoongorora muchina: TensorFlow Lite 2020.08.23, PyTorch 1.4.0, ONNX 1.6.0, Grafana 7.3.1.
Zvishandiso zvakavandudzwa zvemidziyo yakadzivirirwa: Podman 2.1.1-4.28.1, CRI-O 1.17.3, containerd 1.3.9-5.29.3, kubeadm 1.18.4.
Kune vagadziri, Go 1.15, Perl 5.26.1, PHP 7.4.6, Python 3.6.12, Ruby 2.5, Rust 1.43.1 zvinopihwa.
Raibhurari yeBerkeley DB yakabviswa kubva paapr-util, cyrus-sasl, iproute2, perl, php7, postfix, uye rpm mapakeji nekuda kwenyaya dzerezinesi. Iyo Berkeley DB 6 bazi rakatamisirwa kuAGPLv3, izvo zvinodiwa zvinoshandawo kune mafomu anoshandisa BerkeleyDB mufomuraibhurari. Semuenzaniso, ngarava dzeRPM pasi peGPLv2 uye AGPL hazvienderane neGPLv2.
Wakawedzera rutsigiro rweBM Z uye LinuxONE (s390x) masisitimu.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve shanduko uye nhau dzinoratidzwa mune iyi nyowani vhezheni yeVhuraSUSE Leap 15.3, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Dhawunorodha vhuraSUSE Leap 15.3
Kune avo vanofarira mukugona kuyedza iyi vhezheni itsva ye openSUSE Leap 15.3, ivo vanozogona kuwana iyo system mufananidzo zvakananga kubva kune yepamutemo webhusaiti yekuparadzirwa uko iwe kwaunogona kuwana 4.4 GB yepasirese DVD muunganidzwa (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x), pamwe nemufananidzo wakareruka wekumisikidza nekurodha pasi mapakeji kuburikidza nemambure (146 MB) uye makomboni anorarama ne KDE, GNOME uye Xfce.
Kana vari avo vachiri muchikamu chekare uye vachida kugadzirisa kune iyo nyowani vhezheni, ivo vanozogona kugadzirisa yavo yazvino kuisirwa kune iyi nyowani, vanogona kutevera iyo mirayiridzo yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » kuvhuraSUSE Leap 15.3 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Jose Yanes akadaro
Ndinovimba ine rutsigiro rweanopfuura makore maviri. Zvakawanda sekushandurwa kweshanduro nyowani (15.4). Kana zvirizvo, inogona kushandiswa. Ndinoziva kuti vazhinji vachakurudzira kuburitswa kusunungurwa kwandiri. Asi zvinosuruvarisa kuti ini ndinogara ndine matambudziko nemadhiraivha emakadhi emifananidzo
Pindura José Yanes
SOS-P1: Kuongorora yakakura uye iri kukura Samsung Open Source - Chikamu 1
NOS-P1: Kutsvaga yakakura uye iri kukura Netflix Open Source - Chikamu 1